Marka ay dhacday jilaayaasha Bollywood-ka inay shaashada marna waalid isugu noqdaan marna walaal (+sawiro) – Filimside.net
Marka ay dhacday jilaayaasha Bollywood-ka inay shaashada marna waalid isugu noqdaan marna walaal (+sawiro)
Filimka 102 Not Out oo ay wada jileen Amitabh Bachchan iyo Rishi Kapoor kaliya guul wacan Boxoffice-ka kama gaarin sidoo kalena wuxuu dhaliyay hadal heyn ku aadan in labadaan halyee markii ugu horeesay aabo iyo wiilkiisa shaashada ku mataleen.
Sidaa darteed waxaan idiin heynaa 5-jeer oo ay dhacday in jilaayaasha Bollywood-ka marna shaashada walaal ku matalaan marna waalid ku matalaan:
Amitabh Bachchan iyo Rishi Kapoor: labadaan Superstar aflaan badan ayay horey iskula sameeyaan balse aan idiin xasuusino filimkii Classic ahaa Amar Akbar Anthony waxay ku wada jileen walaalo halka 102 Not Out oo dhawaan soo baxayna wiil iyo aabihiis ku mataleen waxaana aabo ahaa Amitabh.
Paresh Rawal iyo Akshaye Khanna: Waa labo jilaa oo door walbo sameyn karaan waxayna wada jileen filimo badan balse filimkii Hulchul labo walaalo ah ayay ku mataleen halka filimkii Mere Baap Pehle Aap aabo iyo wiilkiisa ay ku mataleen.
Amitabh Bachchan iyo Aishwarya Rai Bachchan: sida caadiga Aish iyo Amitabh waa gabbar iyo sodageeda balse shaqo ayaa horey u dhex martay, filimkii Mohabattein Amitabh aabo ayuu u ahaa Aishwarya Rai halka filimkii Hum Kisise Kam Nahi ay ku mataleen labo walaalo ah.
Juhi Chawla iyo Anupam Kher: waxay isla sameeyeen aflaan badan oo caan ah balse filimkii Darr Anupam Kher iyo Juhi Chawla walaalo ayay ku mataleen, waxaa kaloo xusid mudan filimkii Paheli in Anupam Kher uu waalid u ahaa Juhi Chawla asigoo sodag u ahaa.
Karisma Kapoor iyo Suresh Oberoi: cidna ma hilmaami karto ruug cadaa Suresh Oberoi inuu aabo ugu matalay Karisma Kapoorr filimkii Classic ahaa Raja Hindustani, balse waxaan hilmaanay in filimkii Anari uu Suresh Oberoi walaal ugu matalaayay Karishma.
Waxaa Aqrisay 1,976